သူမဖန်တီးတဲ့ လက်မှုအနုပညာလေးကနေ အလှူငွေသိန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့လို့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေလှူဒါန်းသွားမယ့် ချစ်သုဝေ – Cele Snap
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဆရာဝန်မလေး ချစ်သုဝေနဲ့ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလင်းလင်းတို့ ကတော့ လက်ရှိနွေဦ်းတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းက သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ အနုပညာနဲ့ သီချင်းထုတ်လုပ်ပြီး ထိုသီချင်းက ရရှိတဲ့ငွေသားအကုန်လှူဒါန်းမှာဖြစ်သလို ချစ်သုဝေကလည်း သူမကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ လက်မှုအနုပညာနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေလှူဒါန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက သူမဖန်တီးတဲ့ Macrame ကနေ အလှူငွေသိန်း(၆၀) ရရှိခဲ့ကြောင်းကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ့ပထမဆုံးprojectလေးရဲ့ရလဒ်။ စောင်ရေ ၂၀၀လောက်မှန်းခဲ့တာ ၁၀၀၀ကျော် ခုထိလည်းဝယ်နေကြဆဲပေမယ့် ၁၁၀၀ နဲ့ပိတ်ပေမယ့် ငွေလွှဲထပ်ပို့နဲ့ အမှတ်စဉ်1184 နဲ့ ” ၅၉သိန်း ၂သောင်းကျပ်” လှုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မဲ၁၀၀၀ကျော်မှာ macrameလေး ရနိုင်ဖို့ အခွင့်နည်းပေမယ့် လက်မှတ်ဝယ်သူအားလုံးဟာ လှူချင်လို့သာ ဝယ်ခဲ့ကြတာမို့ ကိုဇေရော ဝယ်ရဲခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရော တကယ်ကျေးဇူးပါ။”
“လိုအပ်တဲ့နေရာ၂ခု ကိုလွှဲလို့ပြီးစီးပြီးပါပြီ။ အမှတ်တရဖြစ်ဖို့ Treza’s macrame familyလို့ရေးလိုက် ပါတယ်။ Macrameလေးတွေကို လစဉ် projectလေးတွေနဲ့လုပ်နေဦးမှာမို့ stay tune with us !!!!မနက်ဖြန် 14th dec 6:30 pmမှာ trezaရဲ့ macrame ကံထူးသူကိုရွေးပြီးကြေငြာမယ်နော်..အမှန်တကယ်တော့ အားလုံးဟာကုသိုလ် ဆုတွေရပြီးသားပါ macrameလေးကတော့ အပိုဆုသာသာရယ်ပါ🤝🤝🤝” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ချစ်သုဝေကတော့ သူမဖန်တီးတဲ့လက်မှုအနုပညာလေးကနေ အလှူငွေသိန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အလှူရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရင်း ပီတိဖြစ်နေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သရုပျဆောငျ၊ အဆိုတျော၊ ဆရာဝနျမလေး ခဈြသုဝနေဲ့ သူမရဲ့ခငျပှနျးလငျးလငျးတို့ ကတော့ လကျရှိနှဦျေးတျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူတူ တဈသားတညျးရပျတညျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ လငျးလငျးက သူတတျကြှမျးတဲ့ အနုပညာနဲ့ သီခငျြးထုတျလုပျပွီး ထိုသီခငျြးက ရရှိတဲ့ငှသေားအကုနျလှူဒါနျးမှာဖွဈသလို ခဈြသုဝကေလညျး သူမကိုယျတိုငျဖနျတီးထားတဲ့ လကျမှုအနုပညာနဲ့ စဈဘေးရှောငျကလေးတှအေတှကျ ရနျပုံငှလှေူဒါနျးသှားမှာပဲဖွဈပါ တယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ သူမဖနျတီးတဲ့ Macrame ကနေ အလှူငှသေိနျး(၆၀) ရရှိခဲ့ကွောငျးကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ့ပထမဆုံးprojectလေးရဲ့ရလဒျ။ စောငျရေ ၂ဝဝလောကျမှနျးခဲ့တာ ၁ဝဝဝကြျော ခုထိလညျးဝယျနကွေဆဲပမေယျ့ ၁၁၀၀ နဲ့ပိတျပမေယျ့ ငှလှေဲထပျပို့နဲ့ အမှတျစဉျ1184 နဲ့ ” ၅၉သိနျး ၂သောငျးကပျြ” လှုခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ။ မဲ၁ဝဝဝကြျောမှာ macrameလေးရနိုငျဖို့ အခှငျ့နညျးပမေယျ့ လကျမှတျဝယျသူအားလုံးဟာ လှူခငျြလို့သာ ဝယျခဲ့ကွတာမို့ ကိုဇရေော ဝယျရဲခဲ့တဲ့မိတျဆှတှေရေော တကယျကြေးဇူးပါ။”
“လိုအပျတဲ့နရော၂ခု ကိုလှဲလို့ပွီးစီးပွီးပါပွီ။ အမှတျတရဖွဈဖို့ Treza’s macrame familyလို့ရေးလိုကျ ပါတယျ။ Macrameလေးတှကေို လစဉျ projectလေးတှနေဲ့လုပျနဦေးမှာမို့ stay tune with us !!!!မနကျဖွနျ 14th dec 6:30 pmမှာ trezaရဲ့ macrame ကံထူးသူကိုရှေးပွီးကွငွောမယျနျော..အမှနျတကယျတော့ အားလုံးဟာကုသိုလျ ဆုတှရေပွီးသားပါ macrameလေးကတော့ အပိုဆုသာသာရယျပါ🤝🤝🤝” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။ခဈြသုဝကေတော့ သူမဖနျတီးတဲ့လကျမှုအနုပညာလေးကနေ အလှူငှသေိနျးပေါငျးမြားစှာရရှိခဲ့တဲ့အတှကျ အလှူရှငျတှအေားလုံးကိုကြေးဇူးတငျရငျး ပီတိဖွဈနရေတာပဲဖွဈပါ တယျ။